Ụlọ Nzukọ Tennis nke 1000W Ìhè Ndabere HPS 3000W China Manufacturer
Nkọwa:Ụlọikpe Tennis Court Light Fixtures,Ụlọikpe Tennis Tennis,Ụlọikpe Tennis Tennis Mkpuchi
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu egwu > Egwuregwu Egwuregwu Football > Ụlọ Nzukọ Tennis nke 1000W Ìhè Ndabere HPS 3000W
Enwupụta ìhè ma jiri obere ike, nke belata ụgwọ eletrik gị karịa 70%. Ụlọikpe Tennis Tenw nke 1000w na-enye ihe dịka 130,000lm dịka 3000W Metal Halide na hps ọkụ ọkụ.
Ihe ohuru ohuru Ejiri Nlekere nke Ụlọikpe Na-agba Egwuregwu na -abawanye uru n'ejighị ịchụ àjà. Ngwurugwu nke alumini juputara na ngbanwu nke oma na ngwa ngwa. Chebe ndị ibe LED na ọkwọ ụgbọala iji hụ ogologo ndụ na arụ ọrụ. Ụlọ a na-egwu Tennis Tennis nke a n'èzí na-abịa site na nkedo ejiji yok nke a ga-etinye n'ọnọdụ ọ bụla maka ọtụtụ ọnọdụ na-arị elu. The n'èzí tenis ìhè bulbs nwere ike ji mee stadiums, n'ámá, bọọdụ mkpọsa, na-adọba ụgbọala, ewu mputa mgbidi, egwuregwu n'ụlọikpe, ime obodo, ubi, ọchịchịrị n'azụ ụlọ wdg
ETL kwadoro maka nchekwa na ntụkwasị obi. Anyị na-enyekwa Enyemaka 5 afọ iji hụ na afọ ojuju gị 100%. Họrọ ntaneti ọkụ ọkụ anyị na-enwu gbaa iji chekwaa oge gị na ego gị.
Ihu Igwe Na-achachi Anya Mmiri Mgbe Ugwu 500w Kpọtụrụ ugbu a
Led Akara 300w 130lm / w Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọikpe Tennis Court Light Fixtures Ụlọikpe Tennis Tennis Ụlọikpe Tennis Tennis Mkpuchi Ụlọikpe Tennis Tennis Lighting Fixtures Ụlọikpe Tennis na Ìhè Ụlọ ikpe Tennis Street Light Fixtures Led Yard Light Fixtures